Vatsim-pianarana Mpianatra 21 hihazo an’i Maraoka
Vatsim-pianaran’ireo mpianatra any Toamasina Efa any amin’ny oniversite ny baolina, hoy ny ministera
Tsy niandry ela fa omaly ihany dia nivoaka tamin’ny fahanginana ny Ministeran’ny Fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika mikasika ny fitakian’ireo mpianatry ny oniversite ao Toamasina ny vatsim-pianarany ka nahatonga azy ireo hitokona, omaly.
Minisiteran’ny Fanabezam-pirenena 8 miliara ariary nividiana bonbons sucettes ?
Mivoaka ny dosie sy ny resaka momba ny fandaniana tao amin’ny Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy fampianarana teknika ary ny fanofanana arak’asa tarihin’ny Minisitra Rijasoa Andriamanana Josoa.
Datim-panadinana Ady hevitra tsy mety vita
Anisan'ny mahazo fanontaniana sy fangataham-panazavana maro be avy amin'ireo solombavambahoaka ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Rijasoa Andriamanana.
Oniversitem-panjakana Mihemotra ny famaranana ny taom-pianarana
Mihemotra ny fe-potoana famaranana ny taom-pianarana 2018-2019 ho an’ireo oniversitem-panjakana sy Ivon-toeram-pampianarana ambony, araka ny naoty navoakan’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony nosoniavin’ny Pr Randriamasitiana Gil Dany ny alatsinainy 25 mey teo.
Oniversiten'Antananarivo Efa voaloa ny vatsim-pianarana rehetra
Naloa tamin’ny faran’ny herinandro teo avokoa ny vatsim-pianarana faramparany ho an’ireo mpianatra manovo fahalalana eny amin’ny oniversiten’Antananarivo.
Sekoly Frantsay Ny volana septambra vao hiverina an-dakilasy
Hahemotra amin’ny volana septambra ny fiverenan’ny fampianarana ho an’ny lisea Frantsay eto Antananarivo sy Toamasina, raha ny vaovao azo.
Hanovo fahalalahana any Maroc ireo mpianatra mendrika miisa 21 tamin`ny bakalorea teknika 2018 nanerana an’i Madagasikara.
Andiany faharoa ireto mpianatra ireto ka hianatra mandritra ny roa taona izy ireo mba hahazoany ny mari-pahaizana “Technicien supérieur”. Tafiditra indrindra ao anatin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena Marokana sy Malagasy ny fampiroboroboana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa moa izy ity. Ny minisitry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy arak’asa, Marie Thérèse Volahaingo, dia nanome toky azy ireo fa hiahy azy ireo mandritra ny fotoana handrantoany fianarana any ivelany.